Telefishanka beIN Sports Oo Shaaciyey Wariyeyaasha Tabin Doona Kulamada Caawa – Yaa Qaban Doona Real Madrid vs Barcelona, Chelsea vs Tottenham iyo Liverpool vs Watford – Cadalool.com
Telefishanka beIN Sports Oo Shaaciyey Wariyeyaasha Tabin Doona Kulamada Caawa – Yaa Qaban Doona Real Madrid vs Barcelona, Chelsea vs Tottenham iyo Liverpool vs Watford
Telefishanka ciyaaraha ee beIN Sports ayaa shaaciyey wariyeyaasha tabin doona kulamada caawa ee tartamada horyaalka Premier League iyo Copa del Rey.
Telefishanka ayaa soo bandhigay magacyada ku qoran kulamada caawa ee qaybta luuqadda Carabiga, waxaana kulanka ugu weyn ee El Clasico loo xilsaaray inuu qabto wariye cod macaan oo aad loo jecel yahay.
Kulamada caawa waxa aan ku jirin wariyeyaasha tabin doona Raouf Khalif, waxaase diyaar ah saaxiibkii Cusmaan Shuwali oo masuuliyiinta telefishanku ay ku wargeliyeen ciyaarta uu qaban doono ee ay tahay inuu xilli horeba xogteeda sii raadsado.
Ciyaarta Arsenal ay ku martigelinayso Bournemouth ayaa uu telefishanku ka baahin doonaa beIN Sports 8, waxaana qaban doona wariye Suwar Al-dahab, laakiin ciyaarta adag ee Chelsea ay ku martigelinayso Tottenham ayaa laga daawan doonaa beIN Sports 2, waxaana qaban doona wariye Khaliil Balushi, halka kulamada Manchester United vs Crystal Palace iyo Liverpool vs Watford ay kasoo geli doonaan beIN Sports 7 & eIN Sports 4, waxaana lagu qoray oo qaban doona Maxamed Barakat iyo Khalid Xaddi.
Manchester City iyo West Ham United ayaa loo qorsheeyey in laga baahiyo beIN Sports 5, waxaana diyaar ku ah wariye Maxamed Kawayni.
Ciyaarta ugu xamaasadda badan kulamada caawa ee El Clasico ayaa telefishanka beIN Sports waxa uu u diyaariyey laba Channel iyo Laba wariye oo midba hal channel ka tabin doono.
beIN Sports HD1 iyo beIN Sports HD3, waxaana xilli horeba macluumaadka ciyaarta sii diyaarsan doona Cusaam Shuwali oo ka tebin doono beIN Sports HD1 iyo Axmed Dayib oo ku qoran beIN Sports HD3.